Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » ILake Powell Ukunyamalala: Kulusizi kakhulu kukhenketho!
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Utshintsho lwemozulu lube yinto yokwenyani kwaye lungumcimbi omkhulu kwishishini lezokhenketho eLake Powell, enye yezona ndawo zithandwa kakhulu eArizona nase-Utah, e-USA.
Utshintsho lwemozulu lubeyinyani eArizona nase-Utah ngeLake Powell esengxakini
KwiLake Powell umgca wamanzi wehlile waya ezembalini, ethatha umthwalo omkhulu kushishino lwasekhaya
ILake Powell yindawo yokugcina amanzi kuMlambo iColorado e-Utah naseArizona, eUnited States. Yeyona ndawo yeholide iphambili ityelelwa ngabantu abamalunga nezigidi ezibini minyaka le.
Esi sisisibhengezo kwi Ukhenketho lweLake Powell website:
Siyavuya ukwamkela iindwendwe ezibuyayo kwiLake Powell kwaye sijonge phambili kutyelelo lwakho. Nceda ufumane ulwazi oluhlaziyiweyo malunga notshintsho ekusebenzeni nakwiinkonzo zethu ngeli xesha siphinda sivula.
Impilo kunye nokukhuseleka kweendwendwe, abasebenzi, amavolontiya, kunye namaqabane eLake Powell yeyona nto iphambili kuthi. INational Park Service (NPS) isebenza ngenkonzo ngokubanzi kunye nabasemagunyeni, urhulumente, kunye nabasemagunyeni ukuqinisekisa ukhuseleko lweendwendwe zethu kunye nokulandela ezona zikhokelo zihlaziyiweyo zezempilo.
Imozulu iya isiba shushu ngakumbi kwaye yomile kwaye ingozi yomlilo iyanda mihla le. Ababhenkethi kufuneka basebenzise ulumkiso ngakumbi ekubuyiseleni imihlaba yoluntu xa ingozi yomlilo inyukile.
Izithintelo zomlilo zibangelwa kukwanda kwengozi yomlilo kunye nesidingo sokuthintela imililo ebangelwa ngabantu ngexesha leemeko zomlilo ezinokuba yingozi, ukukhuthaza impilo yoluntu kunye nokhuseleko, kunye nokukhusela izixhobo. Umcimi-mlilo kunye nokukhuseleka koluntu kuhlala kuyinto ephambili ngexesha lomlilo wasendle.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nezithintelo zomlilo kwamanye amazwe oluntu eArizona nase-Utah, nceda undwendwele www.wildlandfire.az.gov kwaye www.ubutsalafo.gov. Ngolwazi oluthe kratya malunga nemililo yasendle kwilizwe liphela, ndwendwela inciweb.nwcg.org.
ILake Powell imi kumantla eArizona kwaye inabela emazantsi eUtah. Inxalenye yoMlambo iColorado e-Glen Canyon yeSizwe yoLonwabo. Malunga neekhilomitha ezingama-2,000 XNUMX elunxwemeni, ilanga elingenasiphelo, amanzi afudumeleyo, imozulu egqibeleleyo, kunye neyona ndawo intle kakhulu entshona, iLake Powell yeyona ndawo yokudlala. Qeshisa iphenyane lendlu, hlala kwikampu yethu, okanye ukonwabele indawo yethu yokuhlala kwaye ukhwele kuhambo olukhokelwayo.
INkonzo yeSizwe yePaki ngequbuliso ibhengeze ebutsheni bale nyanga ukuba amaphenyane azakusebenzisa i-Wahweap Launch Ramp, eyona ndawo iphithizela ukwazisa amaphenyane kule ndawo. Iinqanawa esele zikhutshelwe emanzini zazilumkisiwe zazinethuba elingaphantsi kweveki ukuba zibuyele emhlabeni okanye emngciphekweni wokufumana i-maroon.
Idolophu encinci yePage inabemi abangama-7,500 XNUMX kwaye ngaphandle kwesikhephe sendlu, ishishini lokhenketho alinanto ininzi enokugcina le dolophu incinci iphilayo iqhuba. Yintlekele kuluntu lwePage.
Ngelixa utshintsho lwemozulu luye lwanyusa imililo yasendle, amaza obushushu, kunye nezikhukula ezikhukula ehlotyeni, ikwathatha ubunzima kwishishini lezokhenketho elixhomekeke kwiLake Powell. Kwiveki ephelileyo umgca wamanzi ufikelele kwimbali esezantsi ye-3,554ft, inqanaba elingazange libonwe ukusukela ngonyaka we-1969 xa kwakugcwaliswa idama lokuqala. Indawo enkulu yokugcina amanzi ngoku ikwikota ezintathu engenanto kwaye iya kuhlala ihla okungenani ngentwasahlobo elandelayo ngenxa yokurekhoda amanqanaba asezantsi ekhephu kumlambo waseColorado.
Ngaphandle kweendlela ezisixhenxe zokumiliselwa kwamaphenyane eLake Powell, kuphela yiBullfrog emazantsi e-Utah ehlala isebenza ngokuthembekileyo ngenxa yothotho lwendlela eyandisiweyo. Kodwa loo nto inokuthi kungekudala ifikeleleke.
Ngokwengxelo epapashwe yi-Guardian iphepha lase-UK, i-Bureau of Reclamation yase-US iqikelela ukuba kukho i-79% yamathuba iLake Powell eya kulahla enye i-29ft ukusuka kwimbali esezantsi yangoku "ngelinye ixesha kunyaka olandelayo".
Ngokwengxelo yeNational Park Service, iGlen Canyon yayineendwendwe ezizizigidi ezingama-4.4 ngonyaka ka-2019, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zityelelwa kakhulu kweli lizwe. Iindwendwe zichithe i-427 yezigidi zeedola kwikhasi nakwindawo ezingqongileyo kwaye zixhase imisebenzi engama-5,243 XNUMX, kubandakanya ukubonelela ngomthombo obalulekileyo wengqesho kwisizwe esikufuphi saseNavajo.
Kukho amathuba amakhulu okufumana amanye amathuba okuzonwabisa kwiicanons ezisecaleni ezivela kwiLake Powell.
Umzi mveliso wokuhamba ngeenqanawa uyavuma ukuba iindawo ezinomtsalane ezisanda kufikeleleka eGlen Canyon ngumtsalane omkhulu kubakhenkethi.